तरकारी खेतीबाट पहिचान |
तरकारी खेतीबाट पहिचान
प्रकाशित मिति :2016-06-16 14:07:34
पाल्पा । घरको सामान्य आवश्यता पुरा गर्नको लागि शुरु गरेको बाख्रा पालन तथा तरकारी खेतीले रुपा हितांगा उद्यमी बनेकी छिन् । उनी मदनपोखरा गा.वि.स. र आसपासका महिला दिदीबहिनीको लागि प्रेरणाको स्रोत बनेकी छिन् । निम्न आर्थिक अवस्था भएको परिवारमा जन्मेकी रुपा आज भन्दा ८ वर्ष अगाडी सम्म अर्काको खेतबारीमा ज्याला मजदुरी गरेर परिवारको गुजारा चलाउँथिन् ।
गरिब दलित परिवारमा जन्मेकी रुपाको विवाह भएपछि पनि अवस्था उस्तै रह्यो । गरिबी त छँदै थियो । विवाहपछि थपियो जड्याँहा श्रीमान। श्रीमानको कारण उनले थप समस्या भोग्नुपर्‍यो । रुपा ती पिडादायी दिन सम्झिन ‘त्यसै त समाजमा दलित भनेर भेदभाव गर्ने झन श्रीमान दिनरात मातेर हिँड्ने के नहेपुन् ।’
समाजको व्यवहारले उनलाई केही गरेर देखाउन मन लागयो । दुई सन्तानकी आमा रुपा । आमा भएपछि स्वत पारिवारीक जिम्मेवारी बढछ । उनका श्रीमानको व्यवहारमा कुनै प्रगती भएन । सँधै अरुको खेतबारीमा ज्यालामजदुरी गरेर घरको छाक टार्नुपथ्र्यो । सोँचिन बाख्रा पालन शुरु गरे केही होला कि ! थोरै भएपनि पैसा आउँछ । यताउता गरेर जोहो भएको एक हजारले बाख्रा किनिन र पाल्न थालिन् । त्यहि बाख्राबाट घरको खाँचो टर्न थाल्यो । विस्तारै बाख्राको संख्या बढाउँदै लगिन । कमाई पनि बढ्दै गयो । अहिले त्यही बाख्राको आम्दानीले घरको सम्पुर्ण खर्च टर्छ । अलिअलि बचत पनि हुन्छ । बाख्रापालन बढाएपछि बाख्राबाट हुने जैविक मल पनि धेरै हुन थालेसँगै उनले तरकारी खेती पनि लगाउन थालिन् । तरकारी खेतीको लागि आवश्यक पर्ने मल आफैले पालेको बाख्राबाट पुग्छ । अहिले उनको आम्दानी दोब्बर भएको छ । तरकारी र बाख्राबाट हुने आम्दानीले परिवारको आर्थिक अवस्था दरिलो बनाएकी छिन् ।
उनले मौसमी बेमौसमी तरकारी खेती लगाउने गरेकी छन् । तरकारी खेतीको लागि ४ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर शुरु गरेको खेतीबाट उनले मनग्गे आम्दानी गरेको बताउँछिन् । उनले गरेको परिश्रम र सफलता देखेर गाँउका अन्य महिलाको लागि पनि प्रेरणाकी स्रोत बनेकी छिन् । उनको जस्तै खेती गर्न अरु महिलाले पनि व्यवसायीक रुपमा तरकारी खेती थालेका छन् । अहिले गाउँमा उनको छुट्टै पहिचान बनेकोमा उनी दंग छिन् । भन्छिन् ‘ पहिला दलित केही नजान्ने भनेर हेप्नेहरु पनि आजभोली मेरो कामको प्रशंसा गर्छन् । त्यसैमा खुशी लाग्छ ।’
अहिले रुपाको श्रीमानले जाँडरक्सी छोडेका छन् । श्रीमतिको काममा सहयोग गर्न थालेका उनका श्रीमान अहिले बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा छन् । उनले उत्पादन गरेको तरकारी र बाख्रा खशी तानसेन बजारमा बढी खपत हुने गर्छ । भन्छिन् ‘अब त बजार पनि जानु पर्दैन धेरैजसो यहीँ खरिद गर्न आइपुग्छन् ।’ बाख्रा पालन तथा ब्यवसायीक तरकारी खेतीलाई अझ बिस्तार गर्ने योजना रहेको बताउँछिन् ।